ကွန်ပျူတာဟောင်းကို သုံး၍ ကွန်ပျူတာအဟောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုနည်း - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> ပြင်ဆင်မှုများ >> Linux ကွန်ပြူတာအဟောင်းကိုပြန်လည်ရယူခြင်း
ငါနှင့်အတူဆက်လက် PC နှင့် gadget ကိုပြုပြင်ခြင်း ဒီသူ့ဟာသူအတွက်ပြုပြင်စဉ်းစားမရနိုင်ပေမယ့်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်မကိုပိုပြီးမေးတိုင်းအချိန်တိုင်းပဲ။ အနည်းငယ်ထည့်ပါ သူတို့ကိုအဟောင်းသို့မဟုတ်အဟောင်းတွေဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူကွန်ပျူတာများကိုအလုပ်လုပ်စေသည် operating system ကို။
ငါဒီသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမှု၌ငါဆုံးဖြတ်ချက်များအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြပေမယ့်, အများကြီးပိုတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။ အမှုတင်ပြသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်ပြုခဲ့ပြီးသောအရာများကိုအသစ်ပြောင်းရန်နှင့်စွန့်ခွာရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပါမည်။
ကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွဲများကိုလိုက်နာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အိမ်၌မည်သူမဆိုပြုပြင်နိုင်သည့်အဖြစ်များသောအရာများ ကွန်ပျူတာဖွင့်သောအခါသင်သည်မြင်ကွင်းတွင်ဘာမှမတွေ့ပါ.
သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုကွန်ပျူတာဟောင်း Acer Veriton L460 ကို update လုပ်ဖို့ထားခဲ့တယ်။ ၎င်းသည် Windows Vista Business OEM နှင့်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးယခုတွင် Windows7ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်နှေးကွေးနေပြီးအခြေခံအလုပ်များကိုအသုံးပြုတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးစားသည်။
Windows7ကိုအထောက်အပံ့မပေးတော့ပါ။ ဤကွန်ပျူတာသည် Windows 10 ကိုမရွှေ့နိုင်တော့ပါ။ အနည်းဆုံး Windows ၏ support version ကိုအသုံးပြုရန်
ကွန်ပြူတာသည် browsing နှင့်ကျောင်းတာ ၀ န်များအတွက်သာအသုံးပြုသည်စာသားတည်းဖြတ်သူ Word, LibreOffice ကိုသုံးပါ။ pdf ဖတ်ပြီးတစ်ခုခုပုံနှိပ်ပါ။
PC ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုသင်ကြည့်လျှင်၎င်းသည် 1Gb RAM သာရှိပြီးယနေ့ခေတ်ကုန်သွားပြီဖြစ်သည်။
Windows သို့မဟုတ် Linux
ထူးဆန်းစွာ သူတို့ကကျွန်တော့်ကို Linux မထည့်ပဲပြောခိုင်းတယ်။ ထို့ကြောင့် Lite ဗားရှင်းကိုရှာရန်သို့မဟုတ်အထောက်အပံ့မရှိတော့သည့် Windows XP ကိုထည့်ရန်နှင့်ခိုးကူးဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းရန်မေ့နေသည်။ Linux ထဲမှာထည့်ရတာကောင်းပါတယ်။ အားသာချက်များကိုဤအမှု၌များစွာသောဖြစ်ကြသည်။
Legacy နှင့်အရင်းအမြစ်နိမ့်ကွန်ပျူတာများအတွက်ပေါ့ပါးသည့် Linux Distributions
Install Linux ၏အားသာချက်များ
Linux Lite ကို
အများကြီးပိုများပါတယ်ငါနောက်တစ်ခုအတွက်သူတို့ကိုဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ် အလင်းဖြန့်ဝေကို item.
Xubuntu Linux ကိုစမ်းသပ်ခြင်း
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ Xubuntu (သို့) Manjaro XFCE ကို install လုပ်တဲ့အခါမှာ 512 MB RAM လိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့်ချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။
ငါ Xubuntu ကို install တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည် ၎င်း၏တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း 18.04 ၌တည်၏။ Manjaro ၏လှိမ့်ဝင်ထုတ်လွှတ်မှုကကျွန်ုပ်ကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေခဲ့သည်။ သူတို့ကိုဘာဒုက္ခမှမပေးပါနဲ့။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ installation နှင့်အတူသွားပါ။ အဆင့်များအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
PC သည်၎င်း၏အရန်ကူးခြင်းများပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်ဒေတာကိုမျှသိမ်းဆည်းရန်မလိုပါ။ အကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
Xubuntu ဖြင့် USB ဖန်တီးပါ
တပ်ဆင်ရန်ငါဖန်တီးခဲ့သည် Etcher ကို အသုံးပြု၍ Xubuntu iso ဖြင့် USB bootable။ bootable usb တစ်ခုဖန်တီးရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည် multiplatform application ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါသည်။
Xubuntu ၏ ISO ပုံကို Download လုပ်ပါ သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ
ငါတို့သည် Etcher download လုပ်ပါ, ငါတို့က unzip နှင့် execute ကျနော်တို့နှစ်ချက်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်။
အဆင့် ၃ ဆင့်ပါသော ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပွင့်လာသည်။ ISO, USB နှင့် Flash ကိုရွေးပါ
ပဌမ Xubuntu မှကူးယူသော ISO ပုံရိပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည်သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် bootable လုပ်လိုသည့်ယူနစ်ကိုရွေးချယ်သည်။ ၎င်းအတွက် USB ကိုသင်ထားရန်လိုအပ်ပြီး၊ ဤအဆင့်တွင်သတိပြုရန်မှာအခြား hard drive တစ်ခုကို ရွေးချယ်၍ အရာရာကိုမဖျက်ပါနှင့်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက Linux ကို install လုပ်ဖို့သင်ရွေးထားသော drive ကို format လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး Flash ကိုနှိပ်ပါ။ နှင့်အဆင်သင့်။
Xubuntu ကို Install လုပ်ပါ
ငါတို့ USB အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ငါတို့ install လုပ်မယ်။ အဲဒါကို PC ထဲကိုထည့်ပြီးပြီ။ အကယ်လို့ USB ကြီးကြီးတက်လာရင်ဆက်လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်။
USB ကနေ boot မလုပ်ရင် ဒါပေမယ့်ပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်၊ ဒီဖြစ်ရပ်မှာ Windows7ကိုတင်တယ် BIOS ထဲကိုဝင်ရပါမယ် ပြင်ပ disk များကိုအရင်တင်ရန် option ကိုပြောင်းပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် BIOS ကို F2 ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖွင့်သည်နှင့်သင်စတင်သည်နှင့်။ F2 ကိုမဝင်မှီတိုင်အောင်ဆက်ဖိထားပါ။ အချို့သောကွန်ပျူတာများသို့မဟုတ်လက်ပ်တော့များတွင် F2 အစား Esc သို့မဟုတ်အခြားသော့အချို့ရှိလျှင်၊ သူတို့သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါကသင်သည် Google သို့ BIOS ထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်အသုံးပြုသောမည်သည့်သော့ကိုသင်၏မိခင်ဘုတ်၏လက်စွဲတွင်ရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။
အမှန်တရားကတော့လှတယ်။ မီနူးများသည်ရိုးရှင်းပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလင်းဖြစ်လိုပါကဂရပ်ဖစ်အဆင့်တွင်များစွာမတောင်းဆိုနိုင်ပါ။
Linux ကိုစမ်းသုံးရန်တိုက်တွန်းလို။ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါကမှတ်ချက်ထွက်ခွာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်
Linux (သို့) Windows ဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပါ။
categories Linux ကို, ပြင်ဆင်မှုများ လက်မှတ်အညွှန်း
Arturo Pérez-Reverte မှစပိန်၏သမိုင်း
2 comments "Linux ဖြင့်ကွန်ပျူတာအဟောင်းကိုပြန်လည်ရယူခြင်း" တွင် XNUMX မှတ်ချက်များ
29:2020 pm မှာသြဂုတ်လ 11, 22 တွင်
linux distron လုံလောက်ပါတယ်။
26:2022 pm မှာပြီလ 3, 42
ငါတို့ကို ကောင်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်...
1.1 Windows သို့မဟုတ် Linux
2 Legacy နှင့်အရင်းအမြစ်နိမ့်ကွန်ပျူတာများအတွက်ပေါ့ပါးသည့် Linux Distributions
3 Xubuntu Linux ကိုစမ်းသပ်ခြင်း
3.1 Xubuntu ဖြင့် USB ဖန်တီးပါ
3.2 Xubuntu ကို Install လုပ်ပါ